Biloow Ganacsi | CareerForce
Adigu batrooni isku noqo
Kadib markaad shaqada ciidanka dhamayso, waxaa wanaagsan inaad adigu madax isku noqoto. Haddii aad tahay xubin hada katirsan ama aad horay uga tirsanaan jirtay milatariga ama aad tahay halgamaa kunaafoobay shaqada ciidanka, waaa jiro fursado badan ood kubilaabi karto aadna kukobcin karto ganacsigaaga.
Minnesota Department of Veterans Affairs (Waaxda Minnesota uqaabilsan Arimaha Dadka Soo halgamay) ayaa bixisa adeegyo dhawr ah oo lagu caawinaayo in dadka ciidanka kasoo shaqeeyay ay noqdaan ganacsato. Markaad ganacsigaaga udiiwaangalisana inuu noqdo mid qof ciidanka kasoo shaqeeyay leeyahay, waxaad kafaaiidaysan kartaa adeegyada adigga o kale loogu talagalay.
Macluumaad ka ogoow damaanadaha daymaha ganacsiga
Baro fursadaha maalgalinta ee federaalka ee dadka ciidanka kunaafoobay
Baro macluumaad laxariira Aasaasiyaadka Ganacsiga
Akhri macluumaadka kusaabsan qofkasta oo Minnesota kudhaqan oo raadinaaya inuu bilaabo ganacsi